ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံးဂိမ်းကို လက်တွေ့ပြင်ပမှာ ဖော်ဆောင်မည်? NISSAN ရဲ့ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့ပရောဂျက်က အံ့သြဖွယ်ရာအတိ - JAPO Japanese News
ကြာ 25 Nov 2021, 14:24 ညနေ
Japo စာဖတ်သူများ人生ゲーム ကို သိကြပါသလား?
တကယ်တော့ The Game of Life ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ၁၉၆၀ ခုနှစ်မှာ အမေရိကန်မှာ ရောင်းချတဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီဂိမ်းဟာ ၁၉၆၈ ခုနှစ်မှာ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ရောင်းချပြီးတဲ့နောက် တဟုန်ထိုး လူကြိုက်များ လာခဲ့ပါတယ်။
ဂိမ်းပုံစံက ဒီလို ဘုတ်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ကစားသူတွေဟာ ကားပုံစံငယ်ကို အသုံးပြုပြီး အစပိုင်းမှာ မိမိကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ပင်အပ်ကို ဘုတ်မှာ ထိုးထားရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဂိမ်းကစားနေစဥ်မှာပဲ အိမ်ထောင်ပြုတာ၊ ကလေးမွေးတာတွေကနေ ပင်အပ်ထိုးတဲ့နေရာ တိုးလာနိုင်ပါတယ်။
ဒါတွေအပြင် အခြားပွဲအမျိုးမျိုးကို ဆော့ကစားရင်းနဲ့ နောက်ဆုံးမှာ ဘယ်သူက ပိုက်ဆံအများဆုံးနဲ့ ပန်းဝင်မလဲဆိုတဲ့ ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ခေတ်အလိုက် ဂိမ်းအတွင်းပွဲတွေကိုလည်း အသစ်ပြန်လည်ပြောင်းလဲလေ့ရှိပြီး လက်ရှိအထိကို ဆော့ကစားကြဆဲဖြစ်တဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် ဒါက ကလေးငယ်ရဲ့ တွက်ချက်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံးဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အချင်းချင်းစုဝေးပြီး ဆော့ကစားရတာက စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ The Game of Life ကို လက်တွေ့ဗားရှင်းအနေနဲ့ ပြုလုပ်မယ်လို့ ထုတ်ပြန်လာခဲ့တာကတော့ ကမ္ဘာကျော်ကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ NISSAN ဖြစ်ပါတယ်။
NISSAN က တစ်ခါတစ်လေ ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ လုပ်တတ်တယ်မဟုတ်လားနော်။
လူ၄ ဦးပါ အဖွဲ့ ၂ ဖွဲ့နဲ့ “ The Game of Life” အစစ်ကို ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်မယ့်ကမ်ပိန်းအတွက် ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုလည်း ခေါ်ယူနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ရွေးချယ်ခံရသူဟာ နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ကနေ ၂၈ နေ့အထိ ၂ ညအိပ် ၃ ရက် ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ပါဝင်ဆင်နွှဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ကယ့်ကို အတည်ပေါက်ကြီးလုပ်တဲ့ပုံပါပဲ။
ဘုတ်ဂိမ်းက ပလပ်စတစ်ကားပုံစံငယ်ဟာ ပြင်ပဂိမ်းမှာတော့ NISSAN ကားဖြစ်မှာဖြစ်ပြီး အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့တက်ပလက်နဲ့ Roulette ကို လှည့်ကာ အမျိုးမျိုးသော ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ယှဥ်ပြိုင်ရင်းနဲ့ ပန်းဝင်ရမှာတော့ ကျိုတိုမြို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေသအသီးသီးမှာ ပွဲအသီးသီးရှိပြီး လေထီးနဲ့ ကောင်းကင်ပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်ရတာတို့၊ ကျိုတိုမှာဆိုရင် လူဆွဲလှည်း (Rickshaw) မှာ စီးတာတို့၊ မိကျောင်း၊ ကုလားအုတ်နဲ့ ငှက်ကုလားအုတ်ကို စားရတဲ့ပွဲတွေလည်း ရှိပုံရပါတယ်။
ကိုယ်ပြိုင်ချင်တဲ့ပွဲကို ပြိုင်ရမရဆိုတာကတော့ Roulette ပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ကိုယ်ပြိုင်ချင်တဲ့ပြိုင်ပွဲကို ကြည့်နေရင်းနဲ့ ကျော်သွားတာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ခန့်မှန်းတာကတော့ ပြိုင်ပွဲမှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ NISSAN ကားကို ပြိုင်ပွဲဝင် အဖွဲ့ ၂ ဖွဲ့ကို လက်ဆောင်အနေနဲ့ ပေးမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ ယန်း ၁ သန်းဆုငွေချီးမြှင့်မယ်လို့ ထင်ပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ ဘယ်လိုလာမလဲဆိုတာကတော့ မသိသေးပါဘူး။
ဒီကမ်ပိန်းကနေ NISSAN က လုံးဝ ခေါင်းကြီးပိုင်းမှာပဲ နေရာယူထားမှာလား?
ပြီးတော့ ဒီဂိမ်းအဆုံးသတ်က ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကို စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။
ဒီလို ထူးဆန်းဖွယ်ရာတွေလုပ်ပေးတဲ့ NISSAN ရဲ့ စွမ်းပကားကို မျှော်လင့်နေပါတယ်။
Mitsubishi Motors ၏ဥက္ကဌဟောင်း Osamu Masuko ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီ !!!!!
ဖတ်မိသူတိုင်းမျက်ရည်ကျရတဲ့ ဂျပန်သူနာပြုအသင်း၏ မချိမဆန့်စွာဖြင့်ဖွင့်ဟလာတဲ့အသံ